Adobe dia milentika ao amin'ny Sales Enablement miaraka amin'ny Appkit Toolkit App | Martech Zone
Adobe dia milentika ao amin'ny Sales Enablement miaraka amin'ny Appiness Toolkit App
Alarobia, Jona 25, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny Adobe's Experience Manager (AEM) sy ny Digital Publishing Suite (DPS) dia mitambatra mba hahafahan'ny ekipa marketing hamorona, hamoaka ary hanatsara ny rindranasa finday mifototra amin'ny atiny. Satria ampiasaina ireo fitaovana Adobe tompon-tany, dia azo ampiasaina miaraka amina anatiny Analytics - tsy mila fampandrosoana na fifindra-monina ataon'ny antoko fahatelo.
Adobe dia nandefa ny Fitaovana fanomanana Adobe, mamela ny ekipa mpivarotra Adobe hamolavola ny fampisehoana mpanjifa amin'ny alàlan'ny rindrambaiko tafiditra ao amin'ny iPads - ahafahan'izy ireo mamorona fampisehoana demo, mahazo antoka amin'ny varotra, ary mitazona ny fananana nomerika toy ny PDF, fampisehoana ary haino aman-jery hafa.
Adobe dia mitondra ny fidirana amin'ny varotra sy ny fiantraikany amin'ny alalany Fampiharana Toolkit Toolkit novokarina tamin'ny fampiasana DPS sy Adobe Experience Manager. Ny rindrambaiko fampandehanana varotra dia mampita ny solontena amin'ny hafatra mifandraika amin'ny endrika takelaka, ary manome ny fahitana amin'ny fahombiazana amin'ny alàlan'ny fampidirana CRM amin'ny Salesforce.com.
Ny Toolkitie Ready dia misy koa ny fampidirana CRM mba hahafahana mamakafaka sy atolotra mivantana ny fampidiram-bola. Adobe dia mitatitra tsingerin'ny varotra fohy kokoa, fanamorana ny fanaingoana, manome loharanom-pitaovana iray ho an'ny mpiasa miaraka amin'ny fanavaozana mandeha ho azy sy ny fampandrenesana fanosehana. azonao atao ny misintona ny fandinihana tranga avy amin'ny Adobe, Fanafohezana ny tsingerin'ny varotra.
Ny tombontsoa lehibe dia ahitana:
Sales Reps afaka fidirana, ankehitriny ary fisintomana avy ao amin'ny takelaka misy azy ireo ny atiny multimedia.
izany haingana sy mora havoaka fananana vaovao sy azo ovaina amin'ny tambajotra reps iray manontolo.
Ny fitaovam-pivarotana tena ilaina dia iray amin'ny toerana iray, misy hatrany ary foana misy offline.
izany ampifandraisina amin'ny CRM amin'izay ny mpivarotra dia afaka mahita izay mamaly ny mpanjifa ary manadio atiny ho an'ny fampisehoana tsara kokoa.
Tena mpanova lalao io raha ny hevitro. Ny habaka ahazoana mivarotra dia lanin'ny ankamaroan'ny sehatra fahatelo izay mitaky fifindra-monina atiny sy famokarana teratany. Adobe dia mandingana ireo fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo ireo ary manome alalana ny fitehirizana, ny fanavaozana ary ny fanomezana antoka ny varotra avy amin'ny mpamorona, amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fankatoavana AEM, ary eo am-pelatanan'ny ekipa mpivarotra.
Tags: Adobeadobe dpsAdobe Experience Managerkitapo fanomanana adobeCRMsuite famoahana nomerikadpskitapo vononaFanamafisana ny varotra
FirehoseChat: Site Chat mifangaro amin'ny Mac, iPhone ary iPad
Hevi-diso momba ny fizarana sosialy